Regelingen File Converter
> Resource > Music > Sidee Baan U beddelaan My File Audio in Qaabka File regelingen
Haddii aad tahay qof Injineer maqal ah, halis music lover, DJ ah, qof xirfad la mid ah ama ku sameeyeen cilmi ku filan oo ku saabsan farqiga u dhexeeya kala duwan qaabab file maqal ah, waxa ay noqon doonaa kuwo ku adag in ay awoodaan in ay 'maqlaan' faraqa. Si kastaba ha ahaatee, waxaa weli jira kala duwanaansho u aad u cad oo hufan oo qaar ka mid ah oo u dhexeeya qaab file regelingen ah oo MP3 ah.
Cabbirka file ah file regelingen ah mararka qaarkood waxay noqon kartaa ilaa 2 ama 3 jeer ka badan MP3 ah ay sabab u tahay macluumaadka uncompressed ay dabiiciga ah. Taasi waxa kale oo ay sharxaysaa sababta oo taageera tayada sare ee file maqal ah laftiisa. Qaab file regelingen An la koobiyeysan karaa, diinta qaabab kale file aan wax u dhimin ay 'tayo leh iyo sidoo kale la maqlo iyada oo labada nooc oo dhexdhexaad loo maqli karo sida TV-ga, ciyaaryahanka music digital, qalabka la qaadi karo iyo iwm
Dhinaca kale, qaab file MP3 ah waa mid aad u fiican u yaqaan, waayo 'riixo lossy'. Taasi, si kastaba ha ahaatee, ka shaqeeya wanaagsan haddii ay u playbacks on kombuyuutarrada gacanta, sida nooca file kor u isticmaali doonaa oo kaliya size kaydinta yar oo qalab aad u. Waxa kale oo aan lagu talinayaa in Radidiyaha file MP3 qolka shineemo oo kale ah ama tiyaatarka-size ah sida ka dibna la barbardhigo tayo leh file regelingen ah ee arrin cad noqon doonaa. Haddii aad ku heynaa Converter faylka regelingen lagu kalsoonaan karo, hubi ka Wondershare Video Converter Ultimate .
Talaabada 1: geliyaan files audio
Haddii aad files audio ku kaydsan yihiin ah drive dibadda adag, si fudud ku lifaaq your computer la cable USB ka dibna jiidi-iyo-hoos u files audio gal Converter ah. Haddii kale, riix dar Faylal ay xitaa aad files audio ee buugga tusaha maxalliga ah.
Talaabada 2: format file Select regelingen
Ka dib markii in, guji Output Qaabka> Qaabka iyo regelingen doorashada menu hoos-hoos. Haddii aad doonayso inaad beddelato video files, cajalado GoToMeeting ee iyo kuwa kale files multimedia, waxaad yeelan doontaa ku faraxsanahay in ay ogaadaan in Video Converter Ultimate ka taageertaa in ka badan 158 qaabab file kala duwan. The presets la goobaha ugu fiican file waxaa loo dhisay in aad sahlo.
Tallaabo 3: U beddelaan file maqal ah in qaab file regelingen
Dhamaan inaad hadda waa in guji badalo button si loogu badalo file maqal ah si aad u regelingen. Waxaad awoodi doontaa in aad u aragto horumarka qaab beddelidda sida hoos lagu muujiyey. Waxaa jira ah hako iyo sidoo kale Cancel button haddii aad u baahan tahay.
Feature kale: Download files audio online
Waxaad had iyo jeer ka soo dejisan kartaa files audio jecel laga goobaha internetka sida YouTube, ka dibna Macdan faylka maqal ah oo loogu beddelidda, si ay qaab file regelingen ah. Si fudud u tag Download ee menu oo guji + dar URL in aad nuqulka-iyo-paste URL file ee. Ceshano faylasha laga soo bixi Dhameyso 's shaashadda (dhinaca navigation Murayaad bidix) ka dibna riix on icon arrow ku yaal dhinaca midig oo halaag ah oo dooro badalo in ay , ku xiga Tallaabada 1 ilaa 3 si loogu badalo ka files audio in regelingen .